Duty Vs Desire | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Sports & Recreation » Duty Vs Desire	8
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 16, 2016 in Sports & Recreation | 8 comments
ဖြစ်ပုံက …. ၅ပေါင်ထည့်။ ကွန်ပျူတာ က နှိုက်ပေး တဲ့ မဲကျ အသင်း ကိုယ့် အသင်း။
နိုင်သူ ပေါင်၅၀။ ကျန်ငွေ Charity သို့။
ဘဝ မှာ ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ တာဝန် က
ကိုယ့်လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒ နဲ့
ထိပ်တိုက်တိုး တာမျိုး တွေ ဖြစ်နေကျမို့ မဆန်းတော့ပါဘူး။
Come on “Duty”.
You can do it!!!! About မြစပဲရိုး
kai says: ယူအက်စ် သမ္မတရွေးပွဲအတွက် အဲလိုလောင်းတာ မရှိဘူးလား..။
အိုဘားမားတုံးကတော့ စကော့တလန်က လုပ်ပေးတာ… အခု၇ှာမတွေ့တော့လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12169
Thint Aye Yeik says: ဘာပွဲဖြစ်ဖြစ်…နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ လောင်းချင်လိုက်တာ….
နိုင်မယ့်ဘက်…ဘယ်ဟာဆိုတာ သေချာမသိရင်… မလောင်းပဲ နေပလိုက်မယ်။ လျှာပေါ် မြက်ပေါက်ပေ့စေ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဘောလုံးပွဲတော့ဝါသနာပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: သူကြီးမင်း – လောင်းကစား ဆိုင်တွေ မှာတော့ လောင်းလို့ ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ ကြေး ကို လိုက်ရတာ ထင်တယ်။
Hillary ဆို ကိုယ်က အရှုံးဘက် က နေရမလားဘဲ။ အဲဒါတော့ သိပ်မသိ။
ဆက်ဆက် – အခု ဟာက ချာရတီ ကို လှူဖို့ ငွေကောက် တဲ့ သဘောပါဘဲ။ လူ တွေ ကို ပေးရွေးရင် အားလုံး ထိပ်တန်း အသင်းတွေ ကိုချည်း ရွေးတော့ မှာလေ။
ဒါကြောင့် မဲ ခွဲ ပြီး ကျရာ ကံပေါ့။ အစုတ် အသင်းရတော့လဲ အလှူပေါ့။
တကယ်တော့ နိုင်လဲ နိုင်သူ က ပြန်လှူကြတာများပါတယ်။ ကကြီးမိုက် – သများ Duty ရှုံး တဲ့။ Desire နိုင်တယ်။ သရေ ဖြစ်ပါစေ ဆုတောင်းခဲ့တာ။ မိနစ်လေး နဲ့ ကပ်ပါသွားတယ်။ lol:-)))
ခင်ဇော် says: ကျန်းကျန်းးး
မလာတာကြာပြီမှတ်တာ လောင်းကစား လုပ်နေတယ် ဟလားး
ဦးကြောင်ကြီး says: လော်ဘီစုန်းမ
ဂျစ်စူ says: ဘောပွဲကို မဲနှိုက်လောင်းရတာလား
ငယ်ငယ်က ရုပ်ရှင်ဖွက်တမ်း ကစားသလောက်
ညှင်းညှင်းညှင်း ခွက်ဒစ် ညှင်းညှင်းညှင်း တူ ဥပေ
မြစပဲရိုး says: မထင်နဲ့။ ငါ ဘာအသင်း ကျ မလဲ စောင့်ကြည့်ရတာ ပို ပြီး ရင်ခုန်စရာကွဲ့။ lol:-)))
“ကံ” အကြောင်း ကို မသိသူများ က “ကံ” စမ်းကြတာတော့ မဟုတ်လောက်ဘူး။
ကျရာ ကို အစွဲမရှိ အားပေးဖို့ အသင့် ဆိုတဲ့ စိတ် ရှိကြလို့ လားဘဲ။
နောက်ဆုံး အနှစ် ကတော့ ချာရတီ အတွက် ငွေစု တဲ့ သဘောပါဘဲ။